Ho an'ny masonao fotsiny - Church of God World Switzerland
lahatsoratra > Day-by-Day > Ny masonao ihany
Fa araka ny voasoratra hoe: Izay tsy mbola hitan’ny maso, tsy mbola ren’ny sofina, ary izay tsy niditra tao am-pon’ny olona, ​​dia izay efa namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy.1. Korintiana 2,9).
Teo am-piandrasana ny anjarako handinihana ny masoko aho, dia tonga saina fa tena mahatalanjona ny nanaovana ny masontsika. Rehefa nisaintsaina ny fahagagan’ny maso aho, dia soratra masina maromaro no tonga tao an-tsaiko izay nanokatra ny masoko hahita ny herin’i Jesoa nampahiratra ny jamba. Fahagagana maro no voarakitra ao amin’ny Baiboly mba hianarantsika. Hoy ilay lehilahy jamba hatrany am-bohoka sy nositranin’i Kristy: “Tsy fantatro na mpanota izy na tsia; zavatra iray no fantatro, fa jamba aho taloha, fa mahiratra ankehitriny » (Joan 9,25).
Jamba ara-panahy avokoa izahay rehetra, saingy nampahiratra ny masonay Andriamanitra mba hahitanay ny fahamarinana ao amin’ny soratra masina. Eny! Jamba ara-panahy hatrany am-bohoka aho, fa ankehitriny mahiratra amin’ny finoana, satria Andriamanitra no nampahazava ny foko. Hitako ao amin’ny tenan’i Jesoa Kristy ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra (2. Korintiana 4,6). Tahaka ny nahitan’i Mosesy Ilay tsy hita (Hebreo 11,27).
Tena mampahery ny mahafantatra fa miambina antsika Andriamanitra mba hiaro antsika. "Fa ny mason'i Jehovah mijery eny ambonin'ny tany rehetra mba hanehoany ny heriny amin'izay manana fo tsy misaraka aminy."2. Tantara 16,9). Andeha hojerentsika koa ny bokin’ny Ohabolana manao hoe: “Fa eo imason’i Jehovah ny lalana rehetra, ary ny alehany rehetra mitandrina azy” (Ohabolana). 5,21). “Ny mason’i Jehovah eny tontolo eny, mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy.” ( Ohabolana 15,3). Tsy misy afa-mandositra ny mason’ny Tompo!
Andriamanitra no Mpamorona ny masontsika. Indraindray ny masontsika dia tokony hodinihin'ny manam-pahaizana momba ny maso mba hahitana tsara kokoa. Isaorana Andriamanitra nanome antsika maso mba hahitantsika ny zavaboariny mahagaga manodidina antsika. Mbola maro kokoa, aoka isika hisaotra an’Andriamanitra noho ny nanokatra ny masontsika ara-panahy hahatakatra ny fahamarinany be voninahitra. Amin’ny alalan’ny fanahin’ny fahendrena sy ny fanambarana no ahafantarantsika ny fanantenana nomen’Andriamanitra antsika fony Izy niantso antsika; Endrey ny lova manan-karena sy mahatalanjona ananany eo amin’ny olony masina (Efesiana 1,17- iray).
Rehefa tsy maintsy miandry ny hijery ny masonao ianao, dia eritrereto ny mahagaga ny masonao. Akimpy ny masonao mba tsy hahita na inona na inona. Dia sokafy ny masonao ary jereo ny zavatra manodidina anao. Fahagagana nifandimby, “amin’ny indray mipi-maso, amin’ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, fa hitsoka ny trompetra io, ary ny maty hatsangana, ka tsy mety maty, ary isika hovana” (1. Korintiana 15,52). Hahita an’i Jesosy amin’ny voninahiny isika ary ho tahaka Azy, ho hitan’ny masontsika araka ny maha-izy azy tokoa isika (1. Johannes 3,1-3). Miderà sy misaora an’Andriamanitra Tsitoha noho ny fahagagana rehetra nataony.
Ry Ray any An-danitra, misaotra anao namorona anay mahavariana sy mahafinaritra amin'ny sarinao. Indray andro dia ho hitantsika ny tena toetran'i Jesosy Kristy zanakao. Izany no isaorako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Mpamonjy antsika. amena